Goa - ipharadesi lapho ungakwazi phumula futhi uzizwe ujabule ngokuphelele kude emadolobheni amatasatasa nezinkinga zansuku zonke.
Goa - yindawo lapho imiphefumulo bahlanzwe
India lihlotshaniswa e iningi baseRussia ngemibala egqamile futhi kumnandi ukukhanya ezithandayo futhi emangalisayo ubuhle bemvelo. Konke lokhu kungaba ezingaphezu kuka ukunikeza Goa - abahlanzekile kakhulu futhi enhle isimo Indian.
Ensimini ka Goa zitholakala amahhotela zikanokusho kunazo futhi kuyabiza, le zokudla best ukunikela kwasolwandle fresh, ayoliswe paprika futhi ukhari. Kanye ogwini olunesihlabathi esimhlophe enhle ukuthi ungafuni ukushiya ngaphambi kokuba lishone. Akumangalisi ukuthi abahambi musa kakhulu anakekele kangakanani ngendiza Saint Petersburg ukuze Goa. Bazimisele nokuchitha amahora ambalwa emoyeni, nje uthinte ubuhle engavamile isimo edume kakhulu eNdiya.
Goa Isikhumulo sezindiza
Noma kunjalo, iningi izivakashi akuzona abanganaki ngakho. Abaningi isikhathi esichithwa endleleni, kubaluleke kakhulu. It kuncike lolu hambo futhi ekhangayo endaweni, ngakho lezi izivakashi uncamela njalo ukuqondiswa ngokunembile kangakanani ngendiza Saint Petersburg ukuze Goa. Ukuze abale kakhulu ngokunembile nesikhathi ufuna ukwazi iphuzu ezokufika.
Petersburg, zonke izindiza ngamazwe isuke Pulkovo Airport. Usebenzela imizila yasekhaya kanye nezwe, ngakho umgibeli walo eningi ngonyaka eziyishumi nane million. Pulkovo itholakala eduze nedolobha futhi ngempela elula. Abagibeli njalo ushiye phezu okubuyayo kakhulu.
Izivakashi eziningi Russian uhlela amaholide e Goa, efika Goa International Airport. ENdiya, ngokulinganisa, kukhona zezindiza zamazwe amabili. -Indira Gandhi ubhekwa sezindiza esikhulu, useduze Delhi. Kodwa Dabolim eyakhelwe ezintathu amakhilomitha kweshumi kusukela dolobha Goa. Abaningi bendawo namanje ukusebenzisa igama ubudala futhi igama sezindiza yayo UVasco da Gama.
Dabolim - enkulu ngokwanele ukuze India Airport. ukudlula Minyaka yonke ngokusebenzisa abagibeli abangaba yizigidi ezine, kuba sibalo elihle lokwenza isimo elincane. Izivakashi kufanele uqaphele ukuthi ingaphakathi isakhiwo has imithetho yayo siqu nemikhawulo. Ngokwesibonelo, abagibeli ngeke bakwazi ukungena esigungwini ngaphambi kwamahora amane ngaphambi kokuhamba. Behind le ukuqapha ngokucophelela abasebenzi bengena ebhilidini. Ikakhulukazi kungakhungathekisa for intsha yanamuhla ikhokhwe inthanethi Dabolim, kodwa lo mkhuba isetshenziswa India emahhotela amaningi kanye eziyinxanxathela. Kodwa Goa Airport umhlaba idume amanani ayo ongaphakeme ezitolo, abasebenza "duty khulula" uhlelo. Ngakho-ke, zonke izivakashi bavame ukuletha ekhaya eziningi izimpahla uthenge ngoba amanani engenangqondo ngempela. Labo abazama ukubala ngokucophelela isikhathi undiza kusukela Saint Petersburg ukuba Goa, kufanele sikhumbule ukuthi iphuzu sokufika isikhathi kuzohluka kancane. Umehluko phakathi Petersburg Goa kuyinto ezimbili nesigamu, isimo Indian ngaphambi enhlokodolobha enyakatho.
Indlela undiza kusukela Saint Petersburg ukuba Goa: Ibanga engcono resort Indian
Kuyinto imfihlo ukuthi India - lena kude ngempela kusukela isizwe Russian. Ngakho-ke, indiza esuka kwelinye iphuzu eya kwelinye kungase kungabi kuyashesha futhi kulula. Cabanga ukuthi ingakanani undize uye Goa kusukela Petersburg, unga, kokuba ulwazi ibanga phakathi akulezi zindawo ezimbili. cishe ibanga uhlukanisa abantu bakithi kusukela enhle beach iholide, amakhilomitha angaphezu kuka anamathandathu amawaka. Njengomuntu owaziwayo ofaka umxhwele, akunjalo? Yilokho kuthinta kwendiza ithikithi intengo ngqo.
Indlela ndizela Goa?
Ukuze ubone ukuthi kungakanani ngendiza Saint Petersburg ukuba Goa endaweni yokuqala okumelwe uyenze ukumazi izinketho izindiza. izindiza eziningi abasebenza kule endaweni ethandwa. Ukuze abaholi zihlanganisa "Aeroflot", Condor futhi Lufthansa. 'Hwebani endaweni ekhethekile eyaziwa Qatar Airwais, benza izindiza njalo Goa.
Kuyaphawuleka ukuthi kusukela Petersburg eNdiya, ungakwazi fly ukukhetha okuningi. Izivakashi ukhethe phakathi ngqo, charter kanye izindiza yokuxhuma. Ngamunye has izici zayo siqu.
Indlela undiza kusukela Saint Petersburg ukuba Goa ukuhamba izindiza ezahlukene
Izivakashi eziningi, flying amabanga amade, Kungcono ukusebenzisa izindiza okuhleliwe oqondile. Kodwa manje uwathole kanzima ngokwanele. Ngokwe-izindawo ezithandwa kakhulu amathikithi enjalo zithengiswa khona ngenxa kulezi zinyanga eziyisithupha ezizayo. Goa undiza kusukela Petersburg uwukuphela indiza ngqo kanye ngesonto ngesikhathi isiqongo izivakashi isizini. Ezinye izindaba zika-isikhathi kuyodingeka usebenzise ezinye izinketho.
Charter izindiza anganikeza abahambi nokukhetha kahle esikhulu kwamathikithi yezindiza. Lokhu kungaba indiza nge ukudluliswa noma ngqo. Ngokuvamile E-Indian isiqondiso izindiza nge ukudluliselwa. Qatar Airwais, isibonelo, kwenza ukufakelwa eDoha. It is njengelinye lamazwe ukuxhumana elula kakhulu futhi ngokushesha, cishe uhambo ngeke esaba amahora ayisishiyagalombili isikhathi.
Ngeshwa, izindiza kakhulu ukunikela abahambi undize uye Goa kanye nezingubo ezimbili. Yiqiniso, lokhu kwandisa kakhulu sesikhathi sohambo. elula kakhulu zabahamba iboshiwe e Moscow, kuleli cala, umgwaqo kuzothatha amahora angaba yishumi ne indiza elinde esikhumulweni sezindiza. Abaningi bakhetha ukuba ukufakelwa e Frankfurt, uhambo olunjalo kwakuzothatha okungenani amahora amabili. Futhi lokhu akusona isikhathi irekhodi. Ngezinye izikhathi izindiza yokuxhuma kufanele ulinde cishe usuku, futhi endleleni eya sezindiza Dabolim kulokhu kuzothatha cishe izinsuku ezimbili.
Amanani air travel
Izikhangibavakashi ukuze Goa ayikwazi kubhekwe ezishibhile. Amanani izindiza ngokulinganayo ayithandayo zonke izinketho kwendiza. Inkampani yezindiza yeningi kakhulu inikeza indiza ruble ngamashumi amathathu anamahlanu amawaka. Abanye izinjini internet athengisa amathikithi komunye uhlangothi ruble ezingamashumi amabili nesishiyagalombili namakhulu.
abahambi abanolwazi abaye bavakashela Goa ngokuphindaphindiwe, uhlela ukuthenga amathikithi izinyanga eziyisithupha ngaphambi. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ngempela ukukufunda ngokuningiliziwe amanani emakethe futhi ukhethe iyamukeleka kakhulu. Ezimweni ezinjalo, ngezinye izikhathi kungenzeka ukuthenga ithikithi ku ukubalekela eNdiya ruble ayizigidi ezingamashumi amabili ngamunye zohambo. Konke kuncike inhlanhla, nokukhuthazela uyisivakashi.
Ngamafuphi, singasho ukuthi kungakanani ngendiza Saint Petersburg ukuba Goa, kuxhomeke ezicini eziningana. Futhi kuphela isihambi bangakhetha lokho indiza ke fly, futhi ngokushesha kangakanani-ke kuzoba isifiso esinjalo inhliziyo edolobheni spa.
Yini okufanele ibe kushimula ngokuba esithandweni ukugeza. Ukukhweza ngefasitele ngezandla zakhe
Nomzingeli abomele igazi - ushaka omhlophe